सर्बसाधारणले सहज रुपमा ग्याँस पाउन नसकेको सरकारी स्वीकारोक्ति
काठमाडौं, २५ चैत । पहुँचवालाहरुले उद्योगबाटै ग्यास लैजाने गरेकाले सर्वसाधारणले सहज रुपमा ग्यास नपाएको सरकारी अधिकारीहरुले नै बताएका छन् । ग्यास आपूर्ति समस्या दीर्घकालीन रुपमा समाधान गर्न ग्यास कार्डको व्यवस्था गरिनुपर्ने बताएका छन् । बुधबार राजधानीमा आयोजित साक्षात्कारमा आपूर्ति विभागका महानिर्देशक गोकुल धितालले पहुँचवालाको कारण सर्वसाधारण उपभोक्ताले सहज रुपमा ग्यास पाउन नसकेको बताए । हाल […]
अमेरिका अर्बपतिहरु भएको देशमा पहिलो, चीन दोश्रो ,भारत पाँचौ
काठमाण्डौ । हरेक वर्ष संसारका अर्बपतिहरुको सूचि सार्वजनिक गर्दै आइरहेको अमेरिकी पत्रिका फोब्र्सले यसपटकको अर्बपतिको सूचि समेत सार्वजनिक गरेको छ । अघिल्लो वर्ष भन्दा प्रत्येक पछिल्ला वर्षहरुमा संसारमा अर्बपतिहरुको संख्या बढिरहेको छ । पछिल्लो सूचि अनुसार नेपालका एक अर्बपति विनोद चौधरी फोब्र्सको सूचिमा पर्दा अमेरिकाका भने सबैभन्दा बढी ५ सय ४० अर्बपतिहरु फोब्र्सको सूचिमा परेका […]
सावधान–इजरायल पठाउने नाममा ठगीनुहोला
काठमाडौं , १४ चैत । केयरगिभरमा इजरायल पठाइदिने भन्दै ठगी गर्ने क्रम बढेको छ । वैदेशिक रोजगार विभागकाअनुसार पछिल्ला समयमा ‘इजनरायल पठाइदिन्छु’ भन्दै ठगी गर्ने धेरै व्यक्ति र संस्था सक्रिय छन् । यस्ता प्रलोभन देखाउने कसैसँग रकमको कारोबार नगर्न वैदेशिक रोजगार विभागले सार्वजनिक आह्वान नै गरेको छ । ‘कसैले पनि चाहाँदैमा इजरायल कामदार पठाउन सक्दैन […]
प्राइम कमर्सियल बैंक एशिया प्रशान्त क्षेत्रको उत्कृष्ट बैंक
काठमाडौं, १२ चैत । प्राइम कमर्सियल बैंकलाई बेलायतको अक्सफोर्ड अन्तरगतको यूरोप विजनेश एसेम्बली (इबीए)ले यस वर्षको एशिया प्रशान्त क्षेत्रको उत्कृष्ट बैंकको अवार्ड प्रदान गरेको छ । बुधबार लण्डनमा आयोजित एक कार्यक्रमबीच प्राइम कमर्सियल बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत नारायण दास मानन्धरलाई उत्कृष्ट बैंक तथा उत्कृष्ट म्यानेजर अवार्ड प्रदान गरेको हो । बैंकलाई बेलायतको इबीएले २०१६ को […]
कामदारलाई निकाल्न खोजिएपछि रोकियो मेलम्चीको काम
काठमाडौं ,७ चैत । मेलम्ची खानेपानीको सुरुङ निर्माणमा काम गरिरहेका कामदारलाई निकाल्न खोजिएपछि काम रोकिएको छ । सुन्दरीजलमा काम गरेका टेकबहादुर खड्कालाई आज बिहान कामबाट निकाल्न खोजेपछि त्यहाँ काम गरेका करिब ५० कामदार आन्दोलनमा उत्रेका हुन् । कम्पनीले चोटपटक लाग्दा थोरै बिदा दिने, कामदारको उपचारमा कम्पनीले बेवास्ता गर्ने, धेरै समय काममा लगाउने गरेको गुनासो समेत […]
विदेशमा कमाएको पैसा विदेशमै बसीबसी सुरक्षित लगानी गर्ने ठाउँ खोजिरहनुभएको छ ? छ भने २५ करोड रुपैयाँ बराबरको बैदेशिक रोजगार बचतपत्र किन्नुहोस्
काठमाडौं ,७ चैत । तपाईलाई विदेशमा दुःख गरेर कमाएको पैसा घरपरिवारले फजुल खर्च गरेर हैरान बनाएका छन् ? तपाई विदेशमा कमाएको पैसा विदेशमै बसीबसी सुरक्षित लगानी गर्ने ठाउँ खोजिरहनुभएको छ ? यदि छ भने सरकारले नयाँ प्रस्ताव अघि सारेको छ । आज (आइतबार) देखि सरकारले विदेशमा रहेका नेपालीहरुले लगानी गर्न मिल्ने बैदेशिक रोजगार बचतपत्र निष्काशन […]
उद्योग मन्त्रालयले दुई वर्षभित्र देशमा औद्योगिक क्षेत्रको विकास गरी सक्ने
काठमाडौं , ३ चैत । उद्योगमन्त्री सोमप्रसाद पाण्डेले उद्योग मन्त्रालयले दुई वर्षभित्र देशमा औद्योगिक क्षेत्रको विकास गरी सक्ने योजना बनाएको बताएका छन् । रिपोर्टर्स् क्लबले बुधबार राजधानीमा गरेको कार्यक्रममा उनले प्रत्येक प्रदेशमा एक हजार विघामा औद्योगिक क्षेत्र स्थापन गर्ने योजनाअनुरुप हाल झापा, हेटौंडा रुपन्देही जिल्लामा औद्योगिक क्षेत्र स्थापना गर्न काम अगाडि बढाइएको बताए । उद्योगमन्त्री […]
एमाले अनेरास्ववियुको आयल निगमविरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजूरी दर्ता
काठमाडौं , ३ चैत । विराट पेट्रोलियमलाई बजार मूल्यभन्दा ३० रुपैयाँ बढी मूल्यमा पेट्रोल बिक्री गर्ने अनुमति दिएको भन्दै एमाले भ्रातृ संगठन अनेरास्ववियुले नेपाल आयल निगमविरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजूरी दर्ता गरेको छ । गत बिहीबार निगमले विराट पेट्रोलियमलाई १ एसय २९ रुपैयाँ प्रतिलिटर मूल्यमा पेट्रोल बिक्री गर्ने अनुमति दिएको थियो । निगमले हाल […]
कामका लागि साउदी अरेबिया जाँदै हुनुहुन्छ ? एयरपोर्टमै स्वागत, विभिन्न सेवा र परामर्श दिने
काठमाडौं , ३ चैत । साउदीका श्रममन्त्री मुफ्रीज अल हक्बानी । फाइल तस्वीर कामका लागि साउदी अरेबिया जाँदै हुनुहुन्छ ? अब साउदी अरेबियाको सरकारले तपाईंलाई एयरपोर्टमै स्वागत मात्रै गर्नेछैन विभिन्न सेवा र परामर्श पनि दिनेछ । जाँदाजाँदै साउदी टेलिकम कम्पनी (एसटीसी)ले तपाईंलाई निःशुल्क दिने सिमकार्ड झनै विशेष हुनेछ । सिमकार्डमा केहि मिनेटको फ्रि टकटाइम र […]